Jawaar Mohamed haala Oowwaan simatame - Oromia Shall be Free - Page 2
Ganaraal taddassaa Birruu bara 1941 G.C. Oromo Graphya Keessa, loltoota British, warra Ganaraal wingatiin hogganamuu wajjiin tahuun loltoota finfinnee walaba baasan keessaa nama tokko ture. …
Maqaa fi Gumaacha Hayyuu, Qabsaawaa hangafaa fi Abbaa Qubee Afaan Oromoo kan tahe Dr Sheek Mohammed Rashaad Abdullee tiif beekkamtii kennuu, Hojiilee gaggaarii inni hojjate …
Amaan Kamsareetiin Waan Mootummaa Bilxiginnaa Buqqiftee Aangoo Oromiyaa Fudhachuu Dubbadhu! Seenaa fi maalummaa riphee-lolaa ilaalchisee ammaan dura gulantaalee guddinna loltuu walabummaa babbay’suun kiyya ni yaadatama. …
M/Minsteeraa ta’uu kootu hafa malee Ummanni Oromoo waan isaaf malu dhabuu hin qabu. Ummanni Oromoo baayyinni isaa 35% ta’ee fi biyya kana keessatti sochii ijaarsa …
Naannoo Amaraa Magaala Dasee Bulchiinsa Boombaa Wuhaa jedhamu keessatti dhohiinsa boombii qaqqabeen lubbuun namoota shanii darbuu poolisiin hime. Boombii kana kan dhoosan hidhattoota to’annoo jala …
Magaalaa mummuttii Oromiyaa tan taate Finfinneen yaroo jalqabaatiif sagantaa dorgommii Qur’aanaa kan hirmaattoota addunyaa hirmaachisee keessummeessitee gaggeeysaa jirti. Sagantaan dorgommii Qur’aanaa Staadiyeemii Magaalaa Finfinnee haala …
Paartiin keenna KFOn guyyaa har’aa Waxabajjii 4/2014 ALI. caasaalee godinaa dhiibbaan waggoota lamaaf jalaa diiggamanii laaffifamanii turan deebisee ijaarutti jira. Caasaalee godinaa deebisee ijaaruun guyyaa …
WBOn humnoonni mootummaa hedduunis bakkeewwan garaagaraatti fedhiin isatti makamaa jiraachuu himeeti jira. WBOn akka jedhetti, Cibraan Madda Walaabuu Buttaan Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Cibraan Hambaa …
Page 2 of 469«12345	»	102030...Last »